Iindaba -Izinto ezilishumi ezichaphazela ukuchaneka koomatshini kwezahlulo ezichanekileyo
Njengoko sonke sisazi, isizathu sokuba ukwenziwa kwamalungu achanekileyo kubizwa ngokuba kukuchaneka ngokuchanekileyo kungenxa yokuba iinkqubo zokuqhubekeka kunye neemfuno zenkqubo ziphezulu kakhulu, kunye neemfuno zokuchaneka kwemveliso ziphezulu kakhulu, kwaye ukuchaneka kokuqhubekeka kweendawo ezichanekileyo kubandakanya ukuchaneka kwendawo. Ukuchaneka kobungakanani, ukuchaneka kwemilo, njl., Umhleli ushwankathela ezi zinto zilishumi zichaphazela ukuchaneka kokulungiswa kwamalungu ngokuchanekileyo:
(1) Ukujikeleza kokujikeleza kwesixhobo somatshini kunokubangela impazamo ethile kukuchaneka kokuchaneka kwamalungu.
(2) Ukungachaneki kwesixhobo sikaloliwe wesikhokelo sikaloliwe kunokukhokelela kwiimpazamo ekubunjweni kwezahlulo ezichanekileyo ezenziwa ngumsebenzi.
(3) Amalungu okuhambisa anokubangela iimpazamo kulungiso lomsebenzi, ekwangoyena ndoqo ubalulekileyo kwiimpazamo zomphezulu womsebenzi.
(4) Iindidi ezahlukeneyo zezixhobo kunye nezinto ezalungisiweyo ziya kuba neeyure ezahlukeneyo zempembelelo ekuchaneni kwendawo yokusebenza.
(5) Kwinkqubo yokwenza kunye nokusika, ngenxa yotshintsho lobume bendawo yamandla, inkqubo iya kukhubazeka, eya kuthi ibangele iyantlukwano, kwaye inokubangela amanqanaba eempazamo ngokuchanekileyo kokusebenza.
(6) imikhosi yokusika eyahlukileyo iya kuchaphazela nokuchaneka kwendawo yokusebenza.
(7) Iimpazamo ezibangelwe kukushukuma kobushushu benkqubo. Ngexesha lokulungiswa kwemitshini, inkqubo yenkqubo iya kuvelisa i-deformation ethile ye-thermal phantsi kwesenzo semithombo yobushushu eyahlukeneyo.
(8) Ukuhlengahlengiswa kwenkqubo ngenxa yobushushu kuhlala kubangela ukuchaneka kwendawo yokusebenza ukuba ichaphazeleke.
(9) Ukuchithwa kwesixhobo somatshini ngenxa yobushushu kuya kubangela ukuba i-workpiece ikhubazeke.
(10) Ukuguqulwa kwesixhobo esiyi-thermal kuya kuba nefuthe elikhulu kubugcisa bokusebenza.
(11) I-workpiece ngokwayo ikhubazekile ngobushushu, ebangelwa ikakhulu bubushushu ngexesha lenkqubo yokusika.